Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A August 2010 (6)
Q and A August 2010 (6)
1. သားအိမ်ကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ရာ အကြိတ်ဖြစ်နေတာကို
2. ဝမ်းသွားရင် သွေးပါနေတယ်
3. HIV ရှိရင် ကြွက်နို့ ပေါက်တယ်လို့ ဖတ်ရတယ်
4. Allopathic Physicians
5. I haveaproblem with vaginal thrush
6. ခြေထောက်ထဲတွင် ထည့်ထားသော စတီးများအား
7. I have gonorrhea
Q: ကျနော် မိတ်ဆွေတစ်ဦးက မေးခိုင်း၍ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့သမီးတွင် သားအိမ်ကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ရာ အကြိတ်ဖြစ်နေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ခွဲစိတ်ရမယ်လဲ ဆိုပါတယ်။ သိချင်တာက သူ့သမီးမှာ ကိုယ်ဝန်လည်း ရနေပါတယ်။ သုံးလလောက် ရှိပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ အကြိတ်ကို ခွဲစိတ်ကို ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလားတဲ့။ အဲဒါသိချင်လို့ မေးမြန်းတာပါ။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီ အကြိတ်တွေက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲ။ တစ်ခြားသမီးပျိုများအတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ သိရန် ဖြေကြားပေးပါ။
A: သားအိမ်အလုံးက အဖြစ်နိုင်ဆုံးဟာ Myoma/Fibroid/Liomyoma ထင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်လည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ အရွယ်ကို မှန်းကြည့်ရတာပေါ့။ အလုံးဟာ မခွဲသေးဘဲ ထားရင် ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်မလား ကြည့်ရလိမ့်မယ်။ အလုံးရဲ့ နေရာနဲ့ အရွယ်အစား အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ မမွေးခင် ဘယ်လောက်အထိ ကြီးလာနိုင်သလဲ မှန်းရမယ်။ Ultrasound ကို တခါမက ရိုက်ဘို့ လိုချင် လိုမယ်။ ကိုယ်ဝန် ၃ လ က အတော်နုသေးတယ်။ စမ်းသပ်တဲ့ OG က ပိုပြောနိုင်မှာပါ။ ရောဂါအမည် Diagnosis သိရမှ စာရေးပါရစေ။ ရေပြီးသာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Cure without losing Uterus သားအိမ်မဆုံးဘဲ အလုံးပျောက်စေနည်း
ကိုယ်ဝန် မဟုတ်တဲ့ ဗိုက်ထဲက အလုံး အမေး-အဖြေကို ဖတ်ပါ။
Q: ကျွန်တော်ဝမ်းသွားရင် သွေးပါနေတယ်။ သွေးပါတာ များတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပျောက်မယ်မလဲ။
A: လိပ်ခေါင်းကနေ သွေးယိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဝမ်းပြော့အောင် လုပ်ပါ။ ရေ-အရည် များများသောက်ပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားပါ။ လိုသေးရင် Milk of Magnesia ဆေး ဟင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း မအိပ်ခင် သောက်ပါ။ ဗီတာမင် စီ ၅ဝဝ အား တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ပါ။ ဝမ်းသွားပြီးရင် ရေသုံးပါ။
Q: ကျွန်တော့်မှာ ကျားအင်္ဂါထိပ် အကြားစပ်အခြေ ပေါ်လေးမှာ ကိုင်ကြည့်ရင် မသိပေမယ့် သေချာကြည့်ရင်မိတ်လို အနီစက်လေးတွေ မြင်နေရတယ်။ ရှိနေတာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ၊ မယားပါဘူး။ မနာပါဘူး။ HIV လက္ခဏာတွေ ကြည့်လိုက်တော့ HIV ရှိရင် ကြွက်နို့ ပေါက်တယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော့မှာလဲ ကြွက်နို့ ပေါက်နေတယ်။ ခြေညှို့မှာ ပေါက်နေတယ်။
A: ကြွက်နို့က လိင်အင်္ဂါမှာ ပေါက်နေမှ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါအမျိုးအစားမှာ ပါတယ်။ ကြွက်နို့ တိုင်းက HIV နဲ့ မဆိုင်ပါ။ ပြောတဲ့ အနီစက်က ဖတ်ရတာကို မှန်းရင် ရောဂါ ဟုတ်ပုံမရပါ ဆက်ဆံတာ လုပ်ရင် အကာအကွယ် သုံးပါ။ လိုသေးရင် ပြောပါအုံး။ ကြွက်နို့က ဗိုင်းရပ်စ်ကနေ ဖြစ်တယ်။ ဆရာ့ ဆိုဒ်မှာ ကြွက်နို့အကြောင်းရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အနီစက်လေးတွေ ဆိုတာ ရောဂါဟုတ်ပုံမရပါ။ တော်တော့ဆေး သွားမလိမ်းနဲ့။ နူးညံ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့။
Q: It would be great help if you can tell me how to say Allopathic Physicians in Burmese.
A: The term "Allopathy" was coined in 1842 by C.F.S. Hahnemann to designate the usual practice of medicine (allopathy) as opposed to homeopathy. It is also called Conventional Medicine as practiced by medical
doctors e.g. MBBS or MD degree holders.
So we can call all doctors, physicians and surgeons as allopathic doctors. Some people call us English doctors because we practice non-traditional (non-Burmese) way of medicine. Some may call us Bo-Sayarwun".
Honestly I don't know the formal translation. I prefer to be called "Yo-Yo-Sayarwun".
Q: I am 37 years old. I haveaproblem with vaginal thrush. Normally this is not problematic, not painful, no smell, no discharge. But ...
A: Vaginal Thrush
The vagina contains mucus and some harmless bacteria which help to defend the vagina from Candida germ. These natural defenses may be altered or upset by certain situations. For example: when you are pregnant,
if you have diabetes, or if you take antibiotics. In most cases it develops 'out of the blue' for no apparent reason. People withapoor immune system are also more likely to get thrush.
These are pessaries and creams which you insert into the vagina with an applicator. They contain anti-yeast medicines such as Clotrimazole, Econazole, Fenticonazole, or Miconazole. Commonly,asingle large dose
inserted into the vagina is sufficient to clearabout of thrush. However, you may also want to rub some anti-yeast cream onto the skin around the vagina (the vulva) forafew days, especially if it is itchy. Clotrimazole
vaginal tablet is widely available. Some need one on each day for 5-6 nights.
Fluconazole, which is taken asasingle dose, or Itraconazole which is taken as two doses over the course of one day. Side-effects are uncommon. Do not take these if you are pregnant or breastfeeding. You may also
want to rub some anti-yeast cream onto the skin around the vagina forafew days, especially if it is itchy.
Tablets and topical treatments are equally effective. Tablets are more convenient, but are more expensive than most topical treatments.
Q: ခြေထောက်ထဲတွင် ထည့်ထားသော စတီးများအား မည့်သည့် အချိန်တွင် ထုတ်နိုင်မည်၊ မထုတ်ပဲ မည့်သည့်အချိန်ထိ နေနိုင်သည်၊ မထုတ်ပဲ ထားပါက မည်သို့ အကျိုးအပြစ်မှာ ဖြစ်သည်ကို သိချင်ပါသည်ခင်ဗျာ၊ ယခုအခါ အချိန်အားဖြင့် ၆ လကျော် ၇ လထဲ ရောက်နေပြီခင်ဗျာ၊ ပြန်မည်ဆိုပါ ၃ လသာ လိုပါတော့သည်။ အကယ်၍ ဆက်နေဖြစ်ပါက နောင်နှစ်တွင် ပြန်ထုတ် နိုင်မည်လား ဆိုသည်ကိုလည်း သိလိုပါသည်။
A: တကယ်တော့ သတ်မှတ်ချက် တိတိကျကျမရှိဘူး။ အရိုးဆိုတာ ၁ လခွဲ ၂ လကြာရင် ပြန်ဆက်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ၆ လ နေရင် ပြန်ထုတ်နိုင်တယ်။ ကြာရင် Foreign body ဖြစ်နေတာမို့ ကိုယ်က လက်မခံချင်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါတောင် လက်ခံနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားကို လုပ်ထားတာ။ အနေရခက်တာ တခုခု ဖြစ်လာရင် ထုတ်သင့်တယ်။
ဆရာလဲ ခင်ဗျားလိုဘဲ။ ဒူးအောက်နားမှာ အဲလိုထည့်ထားတာ အခုဆို ၇-၈ နှစ်ရှိနေပြီ။ ထုတ်မယ်လို့ စဉ်းစားပြီး အားချိန် ရှာနေတာနဲ့ ကြာသွားတာ။
ဆရာ့ အတွေ့အကြုံအရ ဝက်အူထိပ်က နာလာတယ်။ ဒူးကောက်ကွေး ကိုက်လာတယ်။ နဲနဲတောင် ရောင်လာတယ်။ ထည့်ပေးတဲ့ အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်က အသေအခြာ ပြောနိုင်ပါမယ်။
Q: I have gonorrhea. I live in Yangon. I go toadoctor. Doctor gave Azithromycin 250 mg (3 times per day). He said this medicine take6days. I want to know this medicine can cure gonorrhea.
A: Azithromycin is ဆေးကို များသောအားဖြင့် နာပြည်ယို၊ အာသီးရောင်၊ လေပြွန်ရောင်၊ နူမိုးနီးယား၊ ဆိုင်းနပ်စ် ရောဂါတွေမှာ ပေးပါတယ်။ STD ခေါ်တဲ့ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ အတွက်လည်း ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂနိုမဟုတ်တာကို ပိုသုံးတယ်။
ဂနိုရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆီးပြွန်အဝရောင်ခြင်း၊ သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ Ciprofloxacin 500 mg ၁ ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Ofloxacin 400 mg ၁ ပြား၊
သာမန် ဂနိုရောဂါ၊ Ceftriaxone 125 mg IM ထိုးဆေး ၁ လုံး၊ ဒါမှမဟုတ် Cefixime 400 mg ၁ ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Ciprofloxacin 500 mg ၁ ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Ofloxacin 400 mg ၁ ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Levofloxacin 250 mg ဒါမှမဟုတ် Penicillin မတည့်ရင် Spetinomycin 1 Gm IM ထိုးဆေး ၁လုံး၊ ဒါမှမဟုတ် Cefpodoxime 400 mg ၁ ပြား၊ ဒါမှမဟုတ် Levofloxacin 250 mg တနေ့ ၁ ပြား။
ရှုတ်ထွေးတဲ့ ဂနိုရောဂါ၊ Penicillin G 10 million units IV daily x5days; Ceftriaxone 1 Gm IV daily x5days; Ciprofloxacin 500 mg BD or Levofloxacin 500 mg OD x5days; Endocarditis = Ceftriaxone 1 Gm BD IV x3weeks
မိန်းကလေးများ အများအားဖြင် Menstruation လာတိုင်း ဗိုက်အောင့်ကြတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲ။ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ ရှိလာနိုင်သလား။ သိရင်ဝေမျှပေးပါ။
၁၉-၉-၂ဝ၁ဝ နေ့က ကျန်းမာရေး-ဆေးပညာ နောက်ဆုံးသတင်းတခုက “အမျိုးသမီးများ PSM လစဉ် ရာသီမလာမီ ခံစားကြရသည့် ဝေဒနာ သက်သာစေရန် Prozac စိတ်မကျဆေး အနည်းငယ်ပေးခြင်ဖြင့် ကောင်းစွာ သက်သာစေမည်။” လို့ ဆိုပါတယ်။
Q: ဆရာခင်ဗျား ကျနော် (့) မှာ နေပါတယ်၊ အသက်က (၃ဝ)ပါ၊ လည်းချောင်းထဲမှာ ချွဲ၊ သလိပ် မကြာခန ကြပ်နေပါတယ်၊ လည်ချောင်းထဲမှာ တစ်ဆို့ဆို့ဖြစ်ပြီး၊ ခပ်ထုတ်လို့လည်း မထွက်ပါဘူး၊ ဘာဆေးသောက်ရင် ပျောက်ကင်းပါသလဲ၊ ကူညီ ဖြေကြားပေးပါ။
A: မဖြေခင် မေးပါရစေ။ ဘယ်လောက်ကြပြီလဲ။ ဖျားသေးလား။ ချွဲက ထွက်ရင် ဘာရောင်လဲ။ အသက်ရှူကြပ်သေးလား။ ဘာဆေးတွေ သောက်ထားလဲ။ ခဏခဏဖြစ်တတ်သလား။ အိပ်ရင်၊ လှဲရင် ပိုဆိုးလား။ ပြန်မဖြေခင် ခပ်လွယ်လွယ် ဆေးနည်းတော့ ပြောပါမယ်။ Amoxacillion ဒါမှမဟုတ် Erythromycin 500 ကို တနေ့ ၂ ကြိမ် ၅ ရက် အနည်းဆုံး သောက်ပါ။ ရေနွေးငွေ့ရှူပါ။ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးတွေထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ ရှူတဲ့ ကရိယာရှိရင် ပိုကောင်းတယ်။ မရှိသေးရင် အငွေ့ ထွက်နေတဲ့ ရေနွေး ခွက်-အိုး ပေါ်မှာ နှာခေါင်း-ပါးစပ်ထားပြီး အသက်ရှူပါ။ ပုဝါတခု အုပ်ထားရင် အငွေ့အပြင် သိပ်မထွက်ဘူး။ ချွဲပျော်အောင် လုပ်ပေးတာပါ။ ဆေးက ပိုးသေအောင် လုပ်တာပါ။ လိုသေးရင် ပြောပါ။
Q: အခုလို ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲဆရာ။ အဲဒီလိုဖြစ်တာ နှစ်နဲ့ချီနေပါပြီ။ ချွဲအရောင်က တခါတလေ အဝါရောင် သန်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နံနက်အိပ်ရာထတဲ့ အချိန်တွေမှာပါ။ အသက်ရှူ နည်းနည်းကြပ်ပြီး မောလည်း မောတယ်။ အဖျားတော့ မရှိပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပုံမှန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မကြာခန ကြပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစာစားပြီးတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဆိုရင် ပိုကြပ်ပါတယ်။ ဆေကတော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ပြောလို့ အမိုင်နို သောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မပျောက်ပါဘူး။ ဆရာပြောတဲ့ ဆေးတွေတော့ မသောက်ဘူးသေးပါဘူး။
A: ပိုသိရတော့ ရောဂါကို ခန့်မှန်းတာပိုကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြာပြီဆိုရင် စစ်ဘို့လိုတယ်။ ပန်းနာ နဲ့ အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်တာ ၂ ခု ခွဲရမယ်။ (အမိုင်နို) ဆေးက ပန်းနာအတွက်သာပေးတယ်။ လေပြွန်လေးတွေ ကျဉ်းလာတာကို ကျယ်အောင် လုပ်ပေးတာ။ ရင်တုံစေတယ်။ ပန်းနာမဟုတ်ရင် မလိုဘူး။ ချွဲဝါတာဟာ ပိုးဝင်နေလို့။ ဓါတ်မှန် ရိုက်ဘူးသလား။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သလိပ်ပိုးရှိနေလို့ ဆရာပြောတဲ့ဆေး သောက်ပါ။ ပန်းနာဖြစ်တာက ရာသီဥတုဖြစ်ဖြစ်၊ အစားအသာက် ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းခံတယ်။ မောတာ၊ ကြပ်တာက အဓိဘဲ။ အခု (အမိုင်နို) ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဆေးတွေ ရှိပါတယ်။ ပန်းနာရှိနေရင်း အာဂန္တုရောဂါ ဝင်လာတတ်သေးတယ်။
Asthma ပန်းနာ ကို အားရင် ဖတ်ပါ။
3. C-box Short Questions
11 Aug 10, 09:45
I would like to get my penis bigger size how to make exercise, if possible. Can you give me your suggestion because my wife is not satisfied with small size?
Bigger size: Please ask me directly by Email. Do you also read Burmese? If that so I have writtenapiece.
11 Aug 10, 12:03
ဆရာခင်ဗျာ.. ကျတော့်ရဲ့ လိင်တံထိပ်က ကျင်နေပါတယ်။ ဆီးသွားချိန်မှာ ကျင်သလို ဒီအတိုင်းနေရင်းနဲ့လဲ တခါ ကျင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါလဲခင်ဗျာ။ ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ။
“ထိပ်ကကျင်နေတာ” ပိုးတခုခုဝင်တာ ဖြစ်န်ိုင်တယ်။ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ မှားမယ်ထင်တာ ဘာဖြစ်ဘူးလဲ။ အနာ-အဆာ ရှိလား။ (အီးမေးလ်) နဲ့ တိုက်ရိုက် မေးစေချင်တယ်။
ကာမဆက်ဆံရင် ကြာအောင်လုပ်တဲ့ ဆေးတွေအစားများရင် ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲခင်များ။
“ကြာအောင်လုပ်တဲ့ ဆေး” ဆေးတိုင်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတယ်။ ဆေးနာမယ်သိရရင် တိတိကျကျ ပြောလို့ရပါမယ်။
11 Aug 10, 13:55
Mifestone နဲ့ Mifeprex တွေကို ဆေးဆိုင်တွေမှာ ဒီအတိုင်းမေးဝယ်လို့၇ပါသလားဆရာ။ သမီးက ရန်ကုန်ကပါ။
RU 486 ကို Mifeprex, Mifestone နာမယ်တွေနဲ့ ရောင်းတယ်။ ရန်ကုန်မှာလည်း ရမှာပါ။ တိုင်းပြည် တခုနဲ့တခု မတူဘူး။ ဗမာပြည်မှာ ဥပဒေ-စည်းကမ်းက သိတဲ့ အတိုင်းဘဲ။
Aug 11, 2010 at 4:48 PM
ကျွန်တော့်ကို ကလေးရနည်းလေးရှိရင် ပေးပါအုံးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်သက်တမ်းက ၄ နှစ်ထဲ ရောက်နေပါပြီ။ ပထမပိုင်း နှစ်ဝက်လောက် တားဆေးကို သုံးပါတယ်။ နောက် လိုချင်ရင် ခက်မှာစိုးလို့ အစွပ်ကိုသုံးပါတယ်။ အခု ၂ နှစ် ကျော်ပါပြီ၊ တားဆေးလဲ မသုံး၊ ဘာအကာအကွယ်မှလဲ မသုံးပဲနဲ့၊ ကလေးက မရသေးဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော့် အသက်က ၂၇ နှစ်နဲ့ အမျိုးသမီးက ၃၅ နှစ်ပါ မြန်မာပြည်မှာ နေတာမဟုတ်တော့ ဆေးခန်းပြဖို့ကလဲ ခက်လို့ပါ။ ကလေး ရနိုင်ဖို့ အထောက်ပြု စားဆေးလေးတွေပေါ့ ဆရာရယ်။ ဒီမှာ မြန်မာဆရာဝန်လည်းမရှိ၊ Language အခက်အခဲက ဆေးခန်းနဲ့ ဆေးပညာ ဆိုင်ရာတွေ ပြောရရင် ပိုဆိုးတယ်ဆရာ။ ဒါကြောင့် ဆရာ့ကိုပဲ အားကိုးတကြီး မေးမြန်းရတာပါ။ အော် ဆရာ တလက်စထဲ ကိုယ်ဝန်ရှိရင် တွေ့ရမယ့် လက္ခဏာလေးတွေလည်း သိချင်ပါတယ်လို့ အမျိုးသမီးက မေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၇ဝ-၈၅% မှာဖြစ်တတ်တယ်။ ရာသီမလာတော့။ ပျို့-အန်ခြင်း၊ ရင်သားနာခြင်း၊ အစာအိမ် ပြဿနာ ပေးခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ မကြာခဏ ဆီးသွားခြင်း၊ မောပမ်းခြင်း၊ သွေးအနည်းငယ် ဆင်းခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။ အရင်ကထက် အားအင်ပြည့်၊ အလေးချိန် တိုးလာမယ်။ အနေအထိုင် ခက်ခဲလာမယ်။ အရေပြား ပြောင်းလဲမှုများရှိမယ်။ သွင်ပြင် လက္ခဏာတွေအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း ပြောင်းလာနိုင်တယ်။
ကလေးရဘို့အရေးဟာ တချို့စုံတွဲတွေအတွက် အတော်ကြီးခက်တယ်။ ဆေးဝါး၊ ကရိယာ၊ Facility အစုံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ချမ်းသာ-တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလည်း ခက်တဲ့သူတွေအတွက် ခက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သန္ဓေတည်၊ ကိုယ်ဝန် ဆောင်အောင် လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေက သိပ်များပြီး၊ တနေရာရာမှာ အားနည်း-ချို့ယွင်းနေရင် မရတတ်လို့ပါ။
အရင်မေးတဲ့သူတွေရှိလို့ ရေးထားပါတယ်။ အချိန်ရရင် ဖတ်စေချင်တယ်။ ကြိုးပမ်းပါအုံး။ မိခင်လောင်း ဘက်ကလား၊ ဖခင်လောင်း ဘက်ကလား။ ဆေးစစ်စရာတွေ လုပ်ရလိမ့်မယ်။ လိုသေးရင်လည်း မေးပါ။
Q and A Infertility (1) ကလေးမရခြင်းအား အမေး-အဖြေ (၁)
Q and A Infertility (2) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း အမေး-အဖြေ (၂)
ဆရာရှင့် ရာသီမလာခင် ၅-ရက်လောက်ကစပြီး ညိုမည်းမည်း အရောင် အကျိအချွဲတွေ ဆင်းပါတယ်။ ပုံမှန် အဖြူဆင်း သလောက်ပါပဲ၊ မများပါ။ အနံ့အသက် ဆိုးရွားခြင်းလည်း မရှိပါ။ နာကျင်ခြင်းလည်း မရှိပါ။ ဒီလိုဖြစ်တာ ၃-၄ လလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်ရှင့်။ ရာသီလည်း လစဉ် မှန်ပါသည်။ အိမ်ထောင်မရှိ အပျိုစင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ အသက်က ၃ဝ ပါ။ အရင်က ဒီလိုမဖြစ်ဘူးတဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာ ရှိ မရှိသိပါရစေရှင့်။
စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ ကျိချွဲတာက သားအိမ်အဝမှာရှိတဲ့ (ဂလင်း) တွေကနေ လာလို့ပါ။ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင် ဖြစ်တတ်တယ်။ ညိုမဲတာက သွေးအဟောင်းနဲ့ ရောနေလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအရွယ်မှာ ရောဂါမဖြစ်တတ်ပါ။ နောက်လလည်း ဆက်ဖြစ်နေရင်တော့ ပြောပါအုံး။